» यौन तालिकाः कसरी दोब्बर आनन्द लिन सकिन्छ ?
३ बैशाख २०७६, मंगलवार ०७:१६
कुरा अनौठो र भड्किलो लाग्न सक्छ । किनभने हामीकहाँ यौनको कुरा गर्नसाथ हामी लाजले खुम्चन्छौं । हामीलाई लाग्छ, यौन भनेको छाडा कुरा हुन् । यही भ्रमित मानसिकताले हामी यौनको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौनको उन्मुक्त आनन्द लिदैनौं । अध्ययनहरुले भन्छ, यौनसुख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र हो । तर, हाम्रो यौन जीवन त्यती सुखमय छैन, जति हुनुपर्ने थियो । त्यही कारण हाम्रो दाम्पत्य कसिलो र रसिलो हुन नसकेको ।
खासमा दम्पतीले यौनसुख कसरी लिने भन्ने कुरामा नयाँ नयाँ अभ्यास गर्न सक्छन् । यसले उनीहरुको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन्छ । किनभने यौनले मानसिक र शारीरिक रुपमा चुस्त बनाउन सहयोग गर्छ । अब चर्चा गरौ, यौन तालिकाको । के यौनका लागि पनि तालिका आवश्यक हुन्छ ? यौन तालिका तय गरियो भने त्यसले दाम्पत्यमा रोमाञ्चकता थपिदिन्छ । त्यतीमात्र होइन, यौन जीवनलाई थप आनन्दित तुल्याउँछ ।
जब थाहा हुन्छ कि आज राति यति बजे यौन क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ, दिनभरी रोमाञ्चित भइन्छ । दिमागमा विभिन्न योजनाहरु बन्न सक्छन् । नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ । फलस्वरुप राति मज्जा दोब्बर हुन्छ ।